यी ३ रा’शि भएका बु’हा’री जसले न’र्क जस्तो घरलाई बनाइदिन्छन् स्व’र्ग सरह, कहिल्यै आउन दिदैनन् दुख ! – Krazy NepaL
यी ३ रा’शि भएका बु’हा’री जसले न’र्क जस्तो घरलाई बनाइदिन्छन् स्व’र्ग सरह, कहिल्यै आउन दिदैनन् दुख !
February 21, 2021 2525
काठमाडौँ । विवाह महिला र पुरुषको मात्र मिलन नभई दुई परिवारको मिलन हो। वैवाहरिक सम्बन्ध सुखद भएमा मात्रै जीवन सुखद रुपमा अगाडी बढ्न सक्छ। जीवन साथी उत्कृष्ट परोस भन्ने हरेक पुरुषको चाहना हुनेछ भने परिवारले पनि उत्कृष्ट बुहारीको आशा राख्छ।
Prevयी पाँच संकेत देखिए भने सम्झनुहोस् दिमाग कमजोर हुँदैछ
Nextयी ४ बार जन्मिने व्यक्ति हुन्छन् सबै भन्दा भाग्यमानी ! तपाईको कुन ?
असार महिनामा चम्किरहेको छ यी ३ राशिको भाग्य, मिल्नेछ फाइदै-फाइदा !
पुरूषहरूको तुलनामा महिलाहरू बढी अर्काको श्रीमानप्रति आर्कषित हुन्छन यस्तो कारण छ